Bandhig Faneedka Columbus Oo Bilaabay Website Cusub Oo Furay Codsiyada Farshaxan Muuqalka Ee Xaflada 2022 - Columbus Arts Fest
COLUMBUS, Ohio - Bandhig faneedka Columbus ee qaran ahaan loo bogay, oo ay soo bandhigtay Hay'adda Korontada ee Mareykanka, ayaa hadda aqbashay codsiyada farshaxanka muuqaalka ah. Bandhig-sannadeedka 60-aad wuxuu dhici doonaa Juun 10-12, 2022 meel cusub, degmada Columbus' Arena. Codsiyada wax qabad iyo iibiyaha cuntada waxay furmi doonaan Sebtember 27.
Maanta, Bandhig faneedka ayaa sidoo kale bilaabay dib-u-qaabayn cusub columbusartsfestival.org, Kaas oo bixisa nakhshad jawaab celin badan, hagitaan isticmaale oo la wanaajiyey iyo habka arji si sahlan loo isticmaali karo ee fannaaniinta, jilayaasha iyo iibiyeyaasha kale.
Codsiyada lagu soo bandhigo fanaaniinta muuqaalka ah waxaa laga aqbalaa khadka tooska ah ee 15 qaybood: 2D Mixed Media, 3D Mixed Media, Ceramics, Art Digital, Drawing, Fiber, Glass, Jewelry, Leather, Metal (aan ahayn farshaxan), Rinjiyeynta, Sawir qaade & Sawir-qaadista Dijital ah, samaynta , Farshaxan iyo alwaax.
Farshaxannada Bartamaha Ohio waxaa lagu dhiirigelinayaa inay codsadaan, iyo haddii ay ku cusub yihiin bandhigga Fannaaniinta si ay u eegaan barnaamijka Farshaxanka Soo baxaya ee Bandhiga, oo si gaar ah loogu talagalay fannaaniinta aan aad u xaddidnayn ama aan khibrad u lahayn soo bandhigida iyo iibinta farshaxankooda xafladaha fanka qaranka. Barnaamijkani waxa uu u furan yahay fanaaniinta Franklin iyo gobolada ku xeeran: Delaware, Fairfield, Fayette, Licking, Madison, Pickaway iyo Union.
Xilliga kama dambaysta ah ee codsiyada farshaxanimada muuqaalka ah waa 5 galabnimo ee Jimcaha, Diseembar 17, 2021.
Sannad kasta ku dhawaad ​​1,000 fanaaniin ah ayaa codsada ilaa 270 goobood oo waabab ah. Farshaxannada waxaa doorta guddi khubaro ah oo ku jira habka xeerbeegtida indho la'aanta ah.
Codsiyada fannaaniinta (muusikada, masraxa, qoob ka ciyaarka, abwaannada iyo qorayaasha), iibiyeyaasha cuntada iyo farshaxan-yaqaannada sawir-qaadista (caricature, dhuxusha, tattoo ku-meel-gaadhka ah iyo rinjiyeynta wejiga) waxay furmi doonaan Sebtembar 27 waxayna dhici doontaa Febraayo iyo Maarso, 2022. Si gaar ah waqtiyada kama dambaysta ah iyo waxyaabaha gaarka ah ee khuseeya dhammaan codsiyada, booqo http://www.columbusartsfestival.org/apply/.
Juun kasta, Bandhigga Farshaxanka Columbus, oo ay soo saaraan Golaha Farshaxanka ee Weyn ee Columbus oo si joogto ah heer qaran ahaan loogu qiimeeyay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dalka, waxay u keentaa farshaxanka ugu wanaagsan Columbus. Bandhiga waxa uu martigeliyaa boqollaal fannaaniin garsoore ah oo ka kala yimid daafaha Maraykanka, iyo sidoo kale dhawr fanaan oo caalami ah sannad kasta. Muusiga, qoob ka ciyaarka, abwaanada & qorayaasha, masraxa, waxqabadyada farshaxanka gacanta lagu hayo ee qoyska oo dhan, iyo sidoo kale cunto iyo cabitaan tayo leh, waxay soo koobaan xaflada xagaaga ee ay jecel yihiin Columbus.
Si aad ugu tabarucdo Bandhig Faneedka Columbus, fadlan tag columbusartsfestival.org/get-involved/volunteer.
Bandhiga Farshaxanka Columbus 2022 waxaa soo bandhigay Mu'asasada Korontada ee Mareykanka. Kafiilasha dheeraadka ah iyo la-hawlgalayaasha waxaa ka mid ah Bank of America, Bath and Body Works, CoverMyMeds, IGS Energy, OSA Technology Partners iyo PNC. Kafiilka warbaahinta waxaa ka mid ah CD92.9 iyo WSNY.
2022 Bandhiga Farshaxanka Columbus wuxuu u guuraa jiinka webiga ee degmada Columbus' Arena. Tani waxay calaamad u tahay goobta afraad ee taariikhda 60-sano ee Festifaalka, laga bilaabo markii ugu horeysay 1962 ee cawska Aqalka Gobolka Ohio ka hor intaysan u haajirin dhinaca biyaha webiga Scioto. Iyadoo webiga webiga dib loo qaabeeyey horraantii 2010-meeyadii, Bandhiga wuxuu ka dhigay gurigeeda Degmada Discovery ka hor inta uusan ku laaban webiga 2012. Hadda, iyada oo koritaanka Scioto Peninsula, Bandhigga Farshaxanka Columbus wuxuu ka dhigi doonaa hoygiisa Degmada Arena, Buuxinta Jidadka Dheer iyo Guga ee ku teedsan dhanka webiga, North Bank Park iyo McFerson Commons. Marka laga soo tago inay tahay hoyga xeegada, baseball-ka iyo kubbadda cagta ee Columbus, degmada si fudud loo heli karo ee Arena waxay bixisaa adeegyo ay ka mid yihiin maqaayado iyo dukaamo kala duwan, iyo sidoo kale u dhowaanshaha hoteelada, waddooyinka baaskiilka iyo garaashyada baarkinka, Scioto Mile, Greater Xarunta Shirarka Columbus, magaalada hoose iyo Degmada Fanka ee Gaaban ee Waqooyiga. Wax badan ka baro arenadistrict.com.